Maro tohanan’ny maro andiany fahadimy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Diakra: mpanao ny raharahan’i Kristy fa tsy fonksionera il y a 4 heures
Fanovana mankaiza marina ! il y a 4 heures
Inona no foto-kevitra entina manangana ny Repoblika ? Manao famelabelaran-kevitra isan-karazany ny Hfkf entina manangana harambaton-kevitra ka atao zava-dehibe ny mahaolona. Lohahevitra efatra no efa nodinihana : ny 60 taona nahazoana fahaleovan-tena, ny fahalovana sy ny fahamarinana, ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananan-tany, ny tanora sy ny hoaviny. Ary dia ny fivavahana sy ny fampandrosoana no lohahevitra fahadimy notontosainy ny talata 17 novambra lasa teo teny Faravohitra.
Kristianina miraviravy tanana
Raha ny zava-misy marina aloha dia saika kristianina daholo ny mpitondra nifandimby teto amintsika nandritra izay 60 taona izay, fa saingy izao no misy antsika ankehitriny, firenena isan’ireo mahantra indrindra maneran-tany. Raha tokony hivoaka andeha hitory hanatsara izao tontolo izao ny kristianina dia tsy izay no zava-nisy fa izao tontolo izao no niditra tao am-piangonana, tsy miditra fe miditra fotsiny fa nanimba ny kolontsaina mahakristianina mihitsy. Nijanona tao am-piangonana ny maha kristianina sisa tavela fa tsy hita izy eny amin’ny asa aman-draharaha, any amin’ny fiaraha-monina. Manjaka ny kolikoly, misy ny mahavita manala ain’olona, ary maro ireo fanadalana zaza tsy ampy taona, ny fanolanana. Tsy toetra kristianina avokoa izany rehetra izany saingy hita sy re matetika amin’ny haino aman-jery. Mangetaheta fahefana ny mpitondra kristianina ary mahavita mifanilika mihitsy. Ifandimbiasana ny mampiditra am-ponja sy ny miditra am-ponja. Foronina izao zavatra rehetra izao entina hanamelohana ny hafa. Miala eto an-toerana ny avy nitondra dia mialokaloka any ivelany. Miova zavatra hafa mihitsy indray, tsy nojerena izay vita teo aloha ka tohizana izay tokony hotohizana fa dia fiaingana hafa mihitsy indray no miainga. Izay foana ny zava-nisy tao anatin’ny 20 taona mahery teo ho eo.
Finoana arahan’asa no mampandroso
Mila mandray andraikitra ny kristianina. Tsy miandry fahefana vao afaka manao zavatra fa ny toeran’ny tsirairay dia ahafahana manao izany. Tsy ampy fotsiny ny mino fa ny asa no ahafahana manova zavatra.
Izany rehetra izany no antony nanaovana izao hetsika izao mba hamakafakana indray ny andraikitry ny fiangonana sy ny kristianina eo amin’iny fampandrosoana ny Firenena. Mila mandini-tena ny kristianina, raha lazaina foana fa ny ampahan’ny maro amin’ny Malagasy no kristianina dia tsy arak’izay ny zava-misy eny amin’ny fiaraha-monina sy ny sehatry ny asa. Izay no antony nisafidianana ny lohahevitra hoe maro tohanan’ny maro, tsy misy mifanilika, tsy misy ny miverin-dalana fa miara mandroso ny rehetra. Tsy ny mpiray antoko ihany no tokony hifanohana fa ny vahoaka rehetra. Izay ilay hoe maro tohanan’ny maro. Izay no ahazoana fandrosoana. Ahazoana harambaton-kevitra hoan’ny faha enimpolo taonan’ny fahaleovan-tena izao. Miara-manangana fa tsy ny sasany manangana sy sasany mibahana sy mamingana, misy ary mandrodana mihitsy. Tsy tokony adino fa ny finoana no mahafindra tendrombohitra fa tsy ny fisehosehoana sy ny fizahozahoana. Tsy ny fihetsiketsehana ivelany no atao betsaka fa ny asa mampandroso miampy fo madio.
Congrégation de la Mission : Diakra: mpanao ny raharahan’i Kristy fa tsy fonksionera - il y a 4 heures
Matoan-dahatsoratra : Fanovana mankaiza marina ! - il y a 4 heures
Fanambaran'ny FFKM : Aoka ny rariny hikoriana... - il y a 1 jour
Filankevitry ny minisitra : Resaka Jirama no nahaliana - il y a 7 jours